onlineakhabar.com: OMG !! एउटी आमाको लापर्वाहिको हद..(हेर्नुहोस् भिडियो)
Amazing News, Amazing Woman, International, Video, Viral Video » OMG !! एउटी आमाको लापर्वाहिको हद..(हेर्नुहोस् भिडियो)
OMG !! एउटी आमाको लापर्वाहिको हद..(हेर्नुहोस् भिडियो)
एउटा कारमा भएको अटोमोबाइल डाटा रेकर्डरको भिडियो क्लिप यतिबेला सामाजिक संजालमा निकै भाइरल बनेको छ । जुन भिडियोमा स्पष्ट देखिएको छ कि भिडियो रेकर्ड भएको कारको अगाडीको गाडीको झ्यालबाट एउटा दुई बर्ष बच्चा खस्न पुग्छिन् ।
पार्क भैरहेको अवस्थामा रहेको बसको झ्यालबाट यसरी खस्दा एउटा आमाको लापर्वाहि कति सम्म भयो भन्ने कुराको अड्कल हुन सक्छ । यसरी खसेपछि केहि समयमै उक्त बच्चालाई उठाउन आउछिन् । उक्त बच्चाकी आमाका अनुसार बच्चा बसको झ्यालमा खेलिरहेको थियो अचानक यसरी खस्न पुगेको थियो । बच्चालाई सामान्य चोट आएको छ । त्यसैले पनि हामी यात्रा गर्दा बच्चाहरुको ख्याल गर्ने गरौ । हेर्नुहोस् भिडियो
Tags : Amazing News Amazing Woman International Video Viral Video